Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Miarahaba ny mpivavaka indray ny moske Thailand
Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Avela hivavaka any amin'ny moske Thaialnd indray
Ny biraon'ny Sheikul Islam (SIO) any Thailand dia nanaiky ny famerenana amin'ny laoniny ny vavaka any amin'ny mosqué any amin'ny vondrom-piarahamonina izay farafahakeliny 70% ny mponina 18 taona na mihoatra no vaksinin'ny COVID-19.
Misy moske eo amin'ny 3,500 any Thailand miaraka amin'ny isan'ny lehibe indrindra ao amin'ny Faritanin'i Pattani ary mifandray indrindra amin'ny Sunni Islam.
Ny fotoam-bavaka any amin'ny moske dia hoferana ho 30 minitra, raha tsy amin'ny zoma izay afaka mivavaka mandritra ny 45 minitra ny mpivavaka.
Ny fepetra ara-pahasalamam-bahoaka dia tsy maintsy arahana ao anatin'izany ny fanaovana sarontava, ny fanalavirana ny fiaraha-monina ary ny fanadiovana tanana.
Ny SIO dia namoaka fanambarana nilaza fa mamela ny vavaka any amin'ny mosqué ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay nanapahan'ny komity Silamo faritany sy ny governoran'ny faritany hanamaivana ny fameperana ny hetsika ara-pivavahana.
Ny birao dia mitaky ireo mpikambana ao amin'ny komity Silamo ao amin'ny moske sy mpivavaka mba hatao vaksiny indray mandeha farafahakeliny. Ny fotoam-bavaka dia voafetra ho 30 minitra ary ny vavaka zoma tsy mihoatra ny 45 minitra.
Araka ny Biraon'ny Sheikul Islam, ny mpanatrika dia tsy maintsy manaraka tsara ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanambarana SIO. Takian'izy ireo ny manamarina ny mari-pana amin'ny vatany alohan'ny hidirany amin'ny mosque, manao saron-tava ary mitazona lavitra 1.5 ka hatramin'ny 2 metatra eo anelanelan'ny andalana tsirairay mandritra ny vavaka. Ny gel fanadiovana tanana dia tsy maintsy mora azo.
Thailand manana mosike 3,494 2007, hoy ny National Statistics Office of Thailand tamin'ny 636, miaraka amin'ny 99, ny toerana misy azy indrindra, ao amin'ny Faritanin'i Pattani. Raha ny filazan'ny Sampan-draharahan'ny raharaha ara-pinoana (RAD), XNUMX isanjaton'ny moskea dia mifandray amin'ny Sunni Islam miaraka amin'ny Shi'i Islam sisa iray isan-jato.
Samy hafa ny isan'ny mponina Silamo ao Thailand, miaraka amin'ireo foko nifindra monina hatrany Shina, Pakistan, Kambodza, Bangladesh, Malaysia, ary Indonezia, ary ao koa ny foko Thai, raha ny roa ampahatelon'ny Miozolomana ao Thailandy kosa dia Thai Thai.
Amin'ny ankapobeny ny mpino ny finoana Silamo any Thailand dia manaraka fomba amam-panao sy fomban-drazana mifandraika amin'ny Silamo nentim-paharazana nitaoman'ny Sufism. Ho an'ny Silamo Thai, toy ny mpiara-miasa aminy any amin'ny firenena maro an'isa bodista ao Azia atsimo atsinanana, ny Mawlid dia fampahatsiahivana an'ohatra ny fisian'ny Silamo ara-tantara ao amin'ny firenena. Izy io koa dia maneho fotoana iray isan-taona hanamafisana ny satan'ny silamo amin'ny maha olom-pirenena Thai sy ny fifikirany amin'ny mpanjaka.
Ny finoana Silamo any Thailand dia matetika taratry ny finoana sy fomba fanao Sufi toy ny any amin'ny firenena Aziatika hafa toa an'i Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, ary Malaysia. Ny Departemantan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina dia manome loka ho an'ny Silamo izay nandray anjara tamin'ny fampiroboroboana sy fampandrosoana ny fiainana Thai amin'ny anjara asany amin'ny maha olom-pirenena, mpanabe ary mpiasa sosialy. Any Bangkok, fampisehoana mavitrika ho an'ny vondrom-piarahamonina Silamo Thai sy ny fomba fiainany ny fetibe lehibe Ngarn Mawlid Klang.